Syria: Tantaram-pitiavana Iray Teny Amorondranomasina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2018 3:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, বাংলা, Swahili, 简体中文, 繁體中文, English
(Marihina fa tamin'ny 01 Novambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitsidika ny fireneny niaviany ilay Profesora literatiora amin'ny teny Anglisy avy any amin'ny tanànakely Mediteraneana any Tartous sy ilay mpanoratra Syriana-Kanadianina iray ary nifanakalo hevitra tao amin'ny toerana fisotroana kafe iray antsoina hoe Sea Breeze. Toy izany no nanombohan'i Mariyah sy Abu Fares ny tantarany ary nanintonan'izy ireo ny mpamaky azy.
Nanapaka ny faharendrenako anaty nofinofy ny trerona manginan'ny vavoniko raha nahare ny fofon-tsakafo manitry ny hazandranomasina aho. Nahatsiaro ho toy ny tsy nihinan-kanina nandritra ny andro maro aho. Nijery teo am-baravarankely indray aho ary nahatsikaritra ilay mpandroso sakafo tsy taitra niankina teo akaikin'ny varavaran'ilay lakozia. Variana namaky boky izy, saingy, toy ny nanana tsindrimandry izy ary nahatsikaritra ahy nijery azy tao anatin'ny segondra vitsy monja. Fantany izay notadiaviko, nitsiky tamiko izy ary nanatona ny latabatro.
“Noana ve ianao?
– Eny! Misy lisitra sakafo ve ?
– Tsy misy eto. Fa holazaiko anao anefa ny efa nomanina anio.
“Andriamanitra ô”, hoy aho, ary nitsiky taminy ihany koa aho, niandry fatratra izay sakafo holazainy.
Toy izany no nanombohan'ny tantara. Teo no niainga ireo mpanoratra roa, izay mifandimby manoratra isan-kerinandro avy. Nahafantatra an'i Yasmine izahay, mpianatr'i Profesora Youssef teo aloha sady mpandroso sakafo ao amin'ny fisotroana kafe Sea Breeze, sy Yazan, ilay mpahandro sakafo tsy rototra, izany rehetra izany dia nitranga teo amoron-dranomasina tsara tarehy ao Tartous sy teo ambany hankaton'ny fanoratan'i Abu Fares sy Mariyah .
Rehefa nampafantatra ny momba azy i Yasmina, dia nahasarika ny masoko ny vehivavy iray hafa . Tao anatin'ny fihetsika mitsingitsingina, nalainy tamin'ny rambony ny trondro kely mafana iray, natsobony moramora tao anaty vilia baolina misy saosy, nataony manoloana ny molony, notsofiny mba ho mangatsiatsiaka ary avy eo nitelina iray manontolo niaraka tamin'ny lohany, sy ny taolany ary ny rambony toy ny ataon'ny olona tendan-kanina. Nakimpiny ny masony ary nankafy izany izy. Avy eo … niaraka tamin'ny tanany ilany, nalainy ny sangany izay nanakona ny masony ary nalefany ho ao ambadiky ny sofiny. Izany indrindra ny fomba nisintonany ny volony izay nambabo ahy tanteraka .
Mbola vao eto amin'ny Fizarana faha-16 isika izao, kanefa mila mahafantatra tsara ny fanombohany aloha ianao.